Ny fandrika fiahiana - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Switzerland
haino aman-jery > Journal succession > 2017-03 mpandimby ny Magazine > Ny fandrika fikarakarana
Tsy nihevitra ny tenako ho jamba an-java-misy marina aho. Saingy miaiky aho fa mandeha amin'ny fantsom-baovao momba ireo dokambarotra momba ny biby aho rehefa tsy misy vaovao ilay vaovao na ny filma sarimihetsika loatra dia tsy azo atao ny hahaliana azy. Misy zavatra tsara amin'ny fijerena ireo mpiambina ny lalao dia misambotra bibidia rehefa ilaina izany, indraindray mitsabo azy ireo amin'ny fomba ara-pitsaboana, ary mamindra ny andian'omby rehetra any amin'ny faritra hafa izay atolotry ny tontolo iainana azy ireo tsara kokoa. Matetika mampidi-doza ny ain'izy ireo ny gamekeepers raha tsy maintsy taitra ny liona, ny hippos na ny rhinos. Mazava ho azy fa miara-miasa amin'ny ekipa izy ireo ary ny dingana tsirairay dia nomanina sy tanterahana miaraka amin'ny fitaovana ilaina. Fa indraindray dia eo amin'ny sisin'ny antsy na efa mandeha tsara ny fitsaboana.
Tadidiko ny hetsika iray izay nomanina tsara sy nahomby. Nisy ekipa manam-pahaizana manokana nametraka "fandrika" ho an'ny andiana biby izay tsy maintsy nafindra any amin'ny faritra hafa. Tokony hahita ahitra tsara kokoa izy any, ary hifangaro amin'ny omby hafa hanatsarana ny fototarazo. Ny tena nahasarika ahy dia ny fahitana ny fomba ahazoana andiam-biby mahery, masiaka ary haingam-pandeha handehanany amin'ireo mpandeha miandry. Natao izany tamin'ny fanamboarana sakana vita amin'ny lamba izay nitazona tsato-by. Nofehezina tsimoramora tao ireo biby ireo mba hahafahany manosika moramora ao anatin'ireo mpandeha miandry.
Nisy ny nanaporofo fa sarotra ny naka azy. Tsy nanaiky anefa izy ireo mandra-pahatongan'ny biby rehetra mipetraka ao anaty fitaterana. Tena mendrika ny hahita ny fomba namotsorana ireo biby ho ao an-tranony vaovao, izay ahafahan'izy ireo mivelatra malalaka sy tsara kokoa, na dia tsy fantatr'izy ireo aza izany.
Hitako fa misy fitoviana eo amin'ireo lehilahy izay mamonjy ireo biby ireo sy ny Mpamorona antsika izay mitarika antsika tamim-pitiavana amin'ny lalana mankany amin'ny famonjena mandrakizay. Tsy toy ny antilopa Eland ao amin'ny tahiry lalao, fantatsika ny fitahian'Andriamanitra na eto amin'ity fiainana ity sy ny fampanantenan'ny fiainana mandrakizay.
Ao amin’ny toko voalohany amin’ny bokiny, i Isaia mpaminany dia mitaraina noho ny tsy fahafantaran’ny vahoakan’Andriamanitra. Ny omby, hoy ny nosoratany, dia mahalala ny tompony ary ny boriky ny fihinanam-bilon’ny tompony; fa ny olon’Andriamanitra kosa tsy mahalala na mahafantatra (Isaia 1,3). Izany angamba no antony iantsoan’ny Baiboly antsika matetika hoe ondry, ary toa tsy anisan’ny biby manan-tsaina indrindra ny ondry. Matetika izy ireo no mandeha amin'ny lalany mba hitady vilona tsara kokoa, fa ny mpiandry ondry mahay indrindra no mitondra azy any amin'ny tany fiandrasana tsara indrindra. Ny ondry sasany dia tia mampiadana ny tenany amin'ny tany malefaka ary mamadika ny tany ho lavaka. Izany no mahatonga azy ireo ho tafahitsoka sy tsy afa-mitsangana. Tsy mahagaga àry raha io mpaminany io ihany ao amin’ny toko faha-53,6 dia nanoratra hoe: “Izay rehetra nania tahaka ny ondry”.
Ny tena ilaintsika dia miantso ny tenany ho “Mpiandry tsara” i Jesosy ao amin’ny Jaona 10,11 sy 14. Ao amin’ilay fanoharana momba ny ondry very (Lioka 15) dia nandoko ny sarin’ilay mpiandry ondry izay tonga tao an-trano niaraka tamin’ny ondry very teo an-tsorony izy, feno fifaliana noho ny fahitana azy indray. Tsy mamely antsika ny Mpiandry tsara antsika rehefa mania toy ny ondry isika. Miaraka amin’ny bitsika mazava sy malefaka avy amin’ny Fanahy Masina, dia mitarika antsika hiverina amin’ny lalana marina Izy.
Naneho famindram-po tamin’i Piera i Jesosy, izay nandà azy intelo! Hoy izy taminy: "Fahano ny ondriko" ary "Fahano ny ondriko". Nasainy nampihomehy ilay misalasala Thomas: "Alefaso eto ny fanondronao ary jereo ny tanako, ... aza mino izany ianao, fa minoa". Tsy misy teny na fanaratsiana henjana, fihetsika iray fotsiny amin'ny famelan-keloka miaraka amin'ny porofo tsy azo lavina momba ny nitsanganany tamin'ny maty. Izany indrindra no nilain'i Tomasy.
Ilay mpiandry tsara io dia mahalala tsara izay ilaintsika hitoerana amin'ny ahitra tsara ary mamela antsika lalandava Izy raha manao fahadisoana toa azy koa isika. Tiany isika na aiza na aiza ho very. Izany dia ahafahantsika mianatra ny lesona ilaintsika. Indraindray maharary ny lesona nefa tsy milavo lefona velively isika.
Tany am-piandohan’ny famoronana, dia nokasain’Andriamanitra hanjaka amin’ny biby rehetra eto an-tany ny olombelona (1. Mosesy 1,26). Araka ny fantatsika, ny ray aman-drenintsika lehibe dia nanapa-kevitra ny handeha amin'ny lalany, ka tsy mbola hitantsika fa ny zavatra rehetra dia eo ambanin'ny olona (Hebreo). 2,8).
Rehefa miverina amin'ny laoniny ny zavatra rehetra i Jesosy dia hahazo ny fanapahana izay nokendren'Andriamanitra ho azy ireo ny olona.
Ireo mpilalao gamekeepers izay naseho teo am-piasana tamin'ny fahitalavitra dia tena nahaliana ny fanatsarana ny fiainan'ny bibidia tao. Mahazo be dia be ny loharanon-karena be mba hanodinana ireo biby raha tsy mandratra azy ireo. Ny tena fifaliana sy fahafaham-po azon'izy ireo avy amin'ny hetsika mahomby dia hita tamin'ny endrika mirehareha ary tamin'ny alàlan'ny tanana.
Saingy azo ampitahaina amin'ny fifaliana sy ny tena fahasambarana izay hitranga rehefa hamita ilay "famonjena" ao amin'ny fanjakany i Jesosy ilay Mpiandry Tsara? Afaka mampitaha ny fametrahana ny fialan-tsasatra eran-tany vitsivitsy, izay ho tsara mandritra ny taona vitsivitsy, miaraka amin'ny famonjena olona an'arivony tapitrisa mandritra ny mandrakizay? Tsy izany mihitsy!